ᐉ Macluumaad ku saabsan Kukiyada - 【Isbarbardhigga】 2022
cookies Farsamooyinka: Iyagu waa kuwa ugu aasaasiga ah oo u oggolaanaya, iyo waxyaabo kale, in la ogaado marka qof ama codsi otomaatig ah uu daalacanayo, marka isticmaale aan la aqoon iyo isticmaale diiwaangashan ay daalacanayaan, hawlaha aasaasiga ah ee hawlgalka degel kasta oo firfircoon.
cookies Falanqeyn: Waxay aruuriyaan macluumaadka ku saabsan nooca hagista aad sameyneyso, qeybaha aad inta badan isticmaasho, alaabooyinka lala tashado, waqtiga isticmaalka, luqadda, iwm.
cookies Xayeysiinta: Waxay muujinayaan xayeysiis ku saleysan daalacashadaada, waddanka aad ka soo jeedo, luqadda, iwm.
Ma awoodi doontid inaad gasho aagga shaqsiyadeed ee boggaas, sida my accountama my profile o amarada My.
Liis ayaa ka soo muuqan doona dhammaan cookies kala soocaa domain. Si ay kuugu fududaato inaad hesho cookies qayb ka mid ah cinwaanka qayb ahaan ama gebi ahaanba gal cinwaanka berrinka Raadi cookies.
Ka dib markaad sameyso shaandhadaan, hal ama dhowr xariiq ayaa ka soo muuqan doona shaashadda leh cookies ee shabakadda la codsaday. Hadda waa inaad doorataa oo riix X si loo sii wado tirtirkeeda.
Tag fursadaha o doorbidida waxay kuxirantahay nidaamkaaga hawlgalka.
En record dooro U adeegso dejimaha gaarka ah taariikhda.
Meeshan waxaad ku arki doontaa ikhtiyaarka cookies block inaad dejiso nooca qufulka aad rabto inaad sameyso.
Tag Asturnaanta & Amniga, waxaad arki doontaa ikhtiyaarka cookies block inaad dejiso nooca qufulka aad rabto inaad sameyso.
Tag Amniga iyo Asturnaanta, waxaad arki doontaa ikhtiyaarka aqbasho cookies si aad u awoodo ama aad u joojiso sanduuqa.